nde 181! HNAC meriri n'ịkwanye na ntinye nke igwe eletrọnịkị maka ọdụ ụgbọ mmiri Kandaji dị na Niger-News-HNAC Technology Co., Ltd.
nde 181! HNAC meriri n'ịkwanye na ntinye nke igwe eletrọnịkị maka ọdụ ụgbọ mmiri Kandaji na Niger.
Oge: 2021-05-25 Hits: 23
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ nwetara "Notice of Winning Bid" nke China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., nyere, na-akwado na HNAC bụ onye meriri maka ịnye ngwá ọrụ na eletriki na ntinye ọrụ nke Kandaji Hydropower Station na Niger. Ọnụ ahịa mmeri bụ US$28,134,276.15 (nke dabara na ihe dịka CNY 18,120.72 puku iri).
Ọdụ ụgbọ mmiri Kandaji dị na Niger bụ otu n'ime ọrụ dị mkpa nke atụmatụ "Otu Belt, Otu Ụzọ". Ụlọ ọrụ ọkụ ahụ nwere ikike arụnyere 130MW yana nkezi ike ike kwa afọ nke ihe dịka nde kilowatt 617. Ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri kacha ibu na Niger. Ọrụ a dị ihe dịka 180km n'elu Niamey, nke bụ isi obodo Niger. Ọ na-elekwasị anya na mmepụta ike ma na-eburu n'uche ma mmiri na mmiri. Mgbe arụchara ọrụ a, ọ ga-edozi oke ọkụ ọkụ dị na Niamey isi obodo Niger na mpaghara ya, nyere Niger aka iwepụ ihe isi ike nke ịdabere na mbubata maka ọkụ eletrik, ma kwalite mmepe akụ na ụba obodo. N'oge a na-arụ ọrụ a, ọ ga-enyekwa ọtụtụ ọrụ iji zụlite ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nkà na ụzụ maka Niger.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, azụmahịa ụlọ ọrụ na Central na West Africa etolitela nke ọma, ngwaahịa na ọrụ ya gbanyere mkpọrọgwụ na Sierra Leone, Senegal, Central African Republic, Equatorial Guinea na mba ndị ọzọ. Imeri nke a ga-eme ka ụlọ ọrụ ahụ nwee mmetụta n'ahịa West Africa. Ụlọ ọrụ ahụ ga-ejikwa ohere a na-aga n'ihu na-emeziwanye ọkwa ọrụ ya ma na-enye aka na nkwado nke China na Africa.
Nke mbụ: [Akụkọ Ọrụ] Ejikọtara Chenzhou Jiucaiping Energy Storage Power Station na grid maka ịrụ ọrụ nnwale.
Ọzọ: HNAC nyeere Huiyang District Agriculture na Water Bureau drainage pump station Arụ ọrụ na Nlekọta Nkà Ọzụzụ Na-aga nke ọma.